Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u badan oo saabsan WordPress. Way fududahay in la isticmaalo, bilaash ah, laydhiyo, waxaana taageersan beel weyn oo marwalba diyaar u ah inay caawiyaan bilowga hore.
Sidii aad u isticmaashay wakhti dheer isticmaala WordPress, waxaan ku faraxsanahay ugudbinta macaamiishooyin ku dhejinaya mashaariicdayda. Noocyada ugu wanaagsan ee software waxay ii engolaadeen inaan dit is xirfad-raadin, sy buuxda u shaqeynaya, ek het internet toegang tot die internet, en dit is die eerste keer aan die Barak codasiga ballaaran.
Marka ay timaado isticmaalka, mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad WordPress arsenal aad tahay foomka dhise. Waxay u ogolaaneysaa dhagaystayaashaada inay dhexgalaan astaantaada – waxay noqonayaan qaabka su’aalaha guud, codsiyada taageero, ama jawaab celinta. Foomamka waxaa sidoo boerenkool loo isticmaali karaa baaritaanno kaa caawinaya inaad fahamto qoto dheer oo aad u aragto dhagaystayaashaada.
Inkasta oo kaydka rasmiga ah ee rasmiga ah ee hore loo soo bandhigay fiilooyinka qaab-dhisida, qaar ka mid ah bloggers iyo suuqyeyaal ayaa doorbidaya inay ku dhuftaan G Suite – mareegta daruuriga ah ee webmasters oo loofu talagay.
Plaas hierin Waxaan ku tusi doonaa hababka kala duwan ee isticmaalka Foomamka Google oo Google WordPress WordPress.
2 U het Foomka Google ee WordPress
In die eerste plek, Google Google Forms iyadoo la isticmaalayo koontada Google ee sax ah.
"Ka bilow foomka cusub," deuro haddii aad rabto inaad ka bilowdo xoqdo ama aad isticmaasho sjabloon horay u jirey.
Dabcan, adigoo adeegsanaya sjabloon waa wakhti badbaadiye ah, gaar ahaan haddii aad horay u ogtahay waxa aad isku deyeyso inaad ku buuxiso foomkaaga. Laakiin si ay u muujiyaan muuqaalada qaababka Google ah, aynu hore u soconno oo ka bilowno sjabloon leeg.
Taab ahaan, tafatiraha foomka aasaasiga ah waxaa ka mid ah "xulasho badan" nooc su’aal ah. Tani waxay faa’iido u leedahay abuurista foomamka sahanka. Hadaad rabto inaad wax boerenkool isticmaasho, dhagsii ‘Dhowr xulasho’ liiska hoos udhaca si aad u muujisid xulashooyinkaaga.
Si aad wax uga beddesho macluumaad kasta, kaliya guji beerta madhan oo qor. Wax walba ayaa lagu badbaadin doonaa daruuraha, jy kan die ding in die walwalo badbaadinta verdwyn.
Waxaad sidoo boerenkool isticmaali mapa sidebar si aad ugu darto walxo boerenkool oo foomka ah, side muuqaal, muuqaal, ama qayb gooni ah.
As jy wil en sleg was, dan kan jy Google, Tixraac Gue-leersentrum adoo gujinaya skakel dit.
U het Foomka Google ee WordPress
As u Google op die webwerf wil verwyder, is dit Google nodig, en dit is nodig om die WordPress te herhaal. Habka ugu sahlan waa inaad ku dhejisaa koodhka codka tooska ah ee boostada ama bogga.
Markaad nuqul ka qaadato, u godub dashboardkaaga WordPress un fur furga ama boostada meesha aad rabto in foomka la arko. U kan tefaftiraha qoraalka as u ‘n kode HTML-kode gebruik.
Xusuusnow, haddii aad ku dhejiso lambarka xargaha adigoo adeegsanaya tifaftiraha muuqaalka, koodhkaagu wuxuu u muuqan doonaa sidii hore. Adeegsiga tifatiraha qoraalka ayaa u sheegaya WordPress inay ubaahantahay inay marto khad gaar ah side koodh. Markii la dhammeeyo, dhagsii batoonka ‘Dulmarka’ si aad u aragto haddii koodhku shaqeynayey.
Haddii boerenkool, waxaad si toos ah ugu rogi kartaa tifaftire muuqaal ah si loo eego haddii foomku si sax ah u muuqdo.
Word in fixtures WordPress uu qeexayo ballaarinta mawduucaaga mawduucaaga. Waxaad kan op die regte pad gekyk word en die voldoende kode is ama adigoo ku xiraya mawduuc boerenkool. Mawduucyada qaarkood, aaladda maadada waxay sidoo boerenkool xajistaa ballac buuxa haddii aad joojinayso widget-yada dhinacyada.
Palette midabbada, dhinaca boerenkool, waxaa lagu beddeli karaa adigoo gujinaya batoonka ‘Midabada Palette’ ee tifaftiraha foomamka Google. Hadaad rabto, waad sawiri kartaa sawirro halkii aad u isticmaali lahayd midabyo asal ahaan asal ahaan ah.
Haddii hadafkaagu kaliya yahay in lagu dhajiyo Foomamka Google si aad boggaaga WordPress u hesho, jawaabta waa haa. Si kastaba ha ahaatee, wpGForm badanaa wuu ka badan yahay oo kaliya isdhexgalka foomamka. Waxay sidoo boerenkool kuu ogolaaneysaa inaad ku qariso magaca foomka, bedelka badhanka gudbinta, isticmaalka jaahwareerka, iyo wixii la mid ah.
Laakiin ka hor inta boerenkool, xasuuso in wpGForm kaliya ay la shaqeeyaan qaabka hore ee qaababka Google.
U kan die mark wpGForm gebruik, u tag dashboardkaaga WordPress en Google ‘Google Forms’> ‘Ku dar Foomka Google ee Cusub.’
Merk die bladsy, klik die bladsy “Foom URL”. Waxaad tan ku heli mapa adado aado tifatiraha foomka Google oo gujinaya ‘Fayl’> ‘Foom dir.’
Waxaa haboon in la ogaado in wpGForm yahay plugin leh kurwe waxbarasho. Isticmaalidda goobaha caadiga ah, foomkaagu wuxuu isticmaali doonaa waxyaabaha asaasiga ah ee asaasiga ah marka laga reebo isticmaalka koodh daboolan.
Laakiin gacmaha midig, Google Forms iyo wpGForm waa isku-dhaf adag oo qaadi kara dadaalkaaga uruurinta xogta ilaa heerka xiga. Waxaad Qeexi kan opgestel word deur CSS, antwoorde op die regte manier, die beste bier, en hoe kan jy Google op Google.
As u wax badan oax saabsan waxyaabaha wil hê, moet u ook wpGForm, waxaad tixraaci kan u na die webwerf van die ‘skepper’ tabaaaaaaaaaaaaaah-.
Kan ek raahsan tahay in foomamku yahay qayb muhiim ah ee khibradda gebruiker WordPress? Haddii ay sidaas tahay, iska hubi boostadan si aad u heshid faa iido dheeraad ah oo ku haboon waxaad isticmaali kartaa.
Waxaa jira waxyaabo badan ooad bad bad oo kuabs WordPress. Way fududahay in la
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u badan oo ku saabsan WordPress. Начин на
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u badan oo ku saabsan WordPress. La isticmaalo,